कीर्तिपुर आयुर्वेद केन्द्रमा कोरोना संक्रमितलाई दिनको तीनचोटि दुई-दुई गोली जडिबुटीको डोज :: विवेक राई :: Setopati
कीर्तिपुर आयुर्वेद केन्द्रमा कोरोना संक्रमितलाई दिनको तीनचोटि दुई-दुई गोली जडिबुटीको डोज
कीर्तिपुरस्थित राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा २५७ जना कोरोना संक्रमित भर्ना भएका थिए। तीमध्ये २१२ जना एक सातामै निको भएर फर्के। ती सबै लक्षण नभएका वा सामान्य लक्षण भएका बिरामी हुन्।
केन्द्रले संक्रमितहरूलाई खुवाउने आयुर्वेद औषधिले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढेर छिटो निको भएको त्यहाँका कोभिड फोकलपर्सन जितेन्द्र श्रेष्ठ दाबी गर्छन्।
'हामी सात दिन पुगेपछि परीक्षण गर्छौं। अहिलेसम्म २५७ मध्ये २१२ जनाको सात दिनमै नेगेटिभ नतिजा आएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सय जनाभन्दा बढी संक्रमित उपचाररत् हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि आयुर्वेद औषधि नै दिइहरहेका छौं।'
केन्द्रका अनुसन्धान अधिकृत डा. अमितमान जोशीका अनुसार उक्त औषधि बनाउन चारवटा जडिबुटी प्रयोग गरिएको छ। जसमा गुडुची, सुन्ठी (सुकेको अदुवा), पिपला र मरिच छन्।
'जडिबुटी र मिनरल मिश्रण गरेर गोलीका रूपमा औषधि बनाएका छौं,' उनले भने, 'बिहान, दिउँसो र बेलुका दुई-दुई गोली खुवाउँछौं।'
यी जडिबुटीको नियमित डोजले लक्षणविहीन र सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई फाइदा गरेको उनको दाबी छ।
'एक सातमा २० जनाको परीक्षण गर्दा सबैको नेगेटिभ देखियो। फेरि ११ जनाको गर्दा ८ जनाको नेगेटिभ र त्यसपछि फेरि ३८ जनाको गर्दा ३२ जनाको नेगेटिभ देखियो,' उनले भने, 'यसरी परीक्षण गरिएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको नेगेटिभ आएको छ।'
सरकारले कीर्तिपुरस्थित केन्द्रको भवनमा आइसोलेसन बनाएर लक्षणविहीन र सामान्य लक्षण भएका संक्रमितलाई राख्दै आएको छ। अहिले पनि सयभन्दा बढी संक्रमित केन्द्रको आइसोलेसनमा छन्।
डा. जोशीले आइसोलेसनमा रहेका सबै संक्रमितलाई उक्त औषधिको सात दिनको डोज बनाएर दिइएको बताए।
कोरोना संक्रमण नेपालमा पनि देखा पर्न थालेपछि केन्द्रले आयुर्वेदबाट के गर्न सकिन्छ भनेर विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि इथिकल बोर्डबाट अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कुन-कुन जडिबुटी उपयुक्त हुनसक्छ भनेर अनुसन्धान गरिएको डा. जोशीले बताए। उक्त भाइरसले प्रतिरोधात्मक प्रणालीको कुन-कुन रसायनलाई असर गर्छ र त्यसलाई कस्ता जटिबुटीले ठिक गर्छ भनेर खोज्दा माथि उल्लिखित चार जडिबुटी छनौट भएको उनले जानकारी दिए।
यो औषधि खुवाएपछि प्राय:को घाँटी खसखस हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने र ज्वरो आउने समस्यामा सुधार भएको केन्द्रले जनाएको छ। गर्भवतीहरूलाई भने औषधि दिइएको छैन।
'एक जना गर्भवती आउनुभएको थियो। उहाँलाई औषधि दिएनौं। बाँकी २२ महिनादेखि ७८ वर्ष उमेर समूहका संक्रमितलाई दिइरहेका छौं,' उनले भने।
योसँगै संक्रमितहरूलाई बेसार पनि खुवाउने गरिएको उनी बताउँछन्। संक्रमितलाई एक गिलास दूधमा बेसार घोलेर दिने गरिएको छ। साथै योग, ध्यान र म्युजिक थेरापी पनि गरिँदै आएको छ।
योग र ध्यान गर्दा संक्रमितहरूमा तनाव सिर्जना नहुने र रोगसँग लड्न मनोबल प्रदान गर्ने श्रेष्ठको विश्वास छ। '१४ दिनको बसाइ सात दिनमा झरेको छ। सात दिनमा परीक्षण गर्दा सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ,' उनले भने।
केन्द्रले खुवाउने जडिबुटी औषधिमा सर्वसाधारणले पनि चासो देखाएका छन्। 'धेरैले औषधिबारे सोध्न फोन गर्नुहुन्छ। यो औषधि हामीले नै बनाएकाले बजारमा पाइँदैन,' श्रेष्ठले भने, 'हामी आवश्यक जटिबुटी बजारबाट ल्याउँछौं र यहीँ औषधि बनाउँछौं।'
केन्द्रले तयार पारेको जडिबुटी औषधि वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि भने भइसकेको छैन। वैज्ञानिक अध्ययन र अनुसन्धानले पुष्टि भएपछि मात्र यसको प्रभावकारिता ठहर हुने विज्ञहरू बताउँछन्।
संक्रमण रोग विशेषज्ञ डा. अनूप सुवेदी भन्छन्, 'आयुर्वेदको ज्ञाता त म होइन। तर मलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ भनेर आयुर्वेदमा अरू एलोपेथिक औषधिको जस्तो ट्रायल भएको थाहा छैन।'
वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि हुन्छ भने मात्र त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिने उनले बताए।
'सयौं जनालाई निको बनायौं भनेर मात्र हुँदैन। दुइटै समूहलाई तुलना गरेर के‍-के सुधार देखियो भनेर हेर्नुपर्छ। त्यसका लागि उनीहरूमा एउटै कुराको प्रयोग गर्नुपर्छ,' डा. सुवेदीले भने, 'होइन भने वैज्ञानिक आधारले पुष्टि नभएका औषधि प्रभावकारी छ भनेर नैतिक रूपले मानिँदैन।'
केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता डा. जोशीले भने यो औषधि क्लिनिकल परीक्षणमा रहेको बताए।
'यो क्लिनिकल परीक्षण नै हो। एलोपेथिक औषधिको जस्तो ल्याबमा विभिन्न चरणमा परीक्षण गरिरहनुपर्दैन। आयुर्वेदमा सिधै व्यक्तिमा प्रयोग गरेर अनुसन्धान वा परीक्षण गर्ने सुविधा हुन्छ,' उनले भने।
डा. जोशीले अब यसको मलिक्यूलर लेबलको अनुसन्धान हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यसका लागि बाहिरी मुलुकसँग सहकार्य गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
'यसको अबको अनुसन्धान बाहिर गर्नुपर्छ। मलिक्यूलर अनुसन्धान गर्न हामीसँग त्योअनुसारको ल्याब लगायत पूर्वाधार छैन,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १४, २०७७, ०७:५०:००